स्वास्थ्य मन्त्री ढकालका ज्वाइँ र भतिजा पनि बिपी प्रतिष्ठानकाे सल्लाहकारमा नियुक्ति – Saurahaonline.com
काठमाडाैं : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा स्वास्थ्य मन्त्रीका ज्वाइँ र भतिजालाई सल्लाहकारको नियुक्ति दिइएको छ।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका ज्वाइँ र भतिजालाई नियुक्ति गरेर आफ्नो नातामा पर्ने एक स्वकीय सचिव पनि थपेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्री ढकालका सहोदर बहिनी-ज्वाइँ विराटनगरका सुमन पन्तलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। मन्त्री ढकालका भतिजा अमृत ढकाल जनसम्पर्क अधिकृत नियुक्त भएका छन्।
पन्त र ढकालको नियुक्ति कात्तिक ११ गतेदेखि लागू भएको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले बताए। उपकुलपतिका नातेदार गणेश गिरीले मंसिर १ गतेदेखि स्वकीय सचिवको रूपमा नियुक्ति पाएका छन्।
जनसम्पर्क अधिकृत नियुक्त भएका ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रीको घर तेह्रथुम छथर गाउँपालिका-५ का हुन्। उनी मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा बोर्डिङ चलाउँथे। पन्त विराटनगरमा कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गर्छन्।
उनीहरूलाई अधिकृतभन्दा माथि फ्याकल्टी डाक्टरसरहको सेवासुविधा दिएर नियुक्ति दिइएको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले बताए। ‘उहाँहरूको सेवा सुविधा फ्याकल्टी डाक्टरसरहको छ,’ एक अधिकारीले भने।
पछिल्लो नियुक्तिसमेत गरेर प्रतिष्ठानमा १० जना सल्लाहकार भइसकेका छन्। मन्त्री र उपकुलपतिले प्रतिष्ठानलाई भाइभारदारको भर्तीकेन्द्र नै बनाएका छन्।
यी सबैको सेवासुविधा जोड्दा वार्षिक करोड रुपैयाँ पुग्ने ती अधिकारीले बताए।
‘उपकुलपतिले प्रतिष्ठानभित्रको टिमलाई विश्वास गरेको देखिँदैन, उहाँले नातेदार र मन्त्रीको दबाबमा नियुक्ति गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्री र भिसीको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएको छ।’
उपकुलपति गिरीले आफ्ना स्वकीय सचिव दिलीप भट्टराईलाई हटाएका छन्। भट्टराईलाई हटाएर उनले एकसाथ तीन जना मन्त्रीका ज्वाइँ पन्त, भतिजा ढकाल र नातेदार गिरीलाई थपेका हुन्।
भट्टराईले भने आफूलाई हटाइएको औपचारिक जानकारी पाएका छैनन्। ‘मलाई हटाइयो भन्ने कुरा सुनेको छु, तर औपचारिक जानकारी पाएको छैन,’ उनले भने।
यता, भट्टराईको ठाउँमा मंसिर १ गतेदेखि नियुक्ति भएका गिरीले स्वकीय सचिवको हैसियतमा सेतोपाटीसँग कुराकानी गरे। तर, तपाईंको नियुक्ति कहिले भनिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दा भने, ‘मेरो नियुक्ति भएको छैन।’
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले पछिल्लो पटक उपकुलपतिको सचिवालयमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिव गरी तीन जना थपिएको जानकारी पाएको बताए।
‘तीन जनाको नियुक्ति भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु, के कसरी हो भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने।
प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता चूडामणि पोखरेलले उपकुलपतिले गरेको नयाँ नियुक्तिबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नरहेको बताए।
‘मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मिडियामा आएको समाचारको आधारमा मैले थाहा पाएको हो,’ पोखरेलले भने।
प्रतिष्ठानमा पन्तको नियुक्तिसँगै कानुनी सल्लाहकार मात्र तीन जना भएका छन्। उपकुलपति गिरी २०७६ चैत २८ गते प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएपछि चिरञ्जीवी खतिवडालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेका थिए। खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालका स्वकीय सचिव भुवन खतिवडाका दाजु हुन्।
त्यसपछि गिरीले विराटनगरका अर्का कानुन व्यवसायी शान्तिराम भण्डारीलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेका थिए। भण्डारीलाई विराटनगर क्षेत्रका अदालत र खतिवडालाई सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दा-मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
नयाँ नियुक्ति पाएका ज्वाइँ पन्तलाई भने कार्यालयकै कामकाजका विषयको कानुनी पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उपकुलपति गिरीका अन्य सल्लाहकारमा गोविन्द श्रेष्ठ पनि छन्। उनलाई प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गरिएको छ।
प्रेस संयोजकको रूपमा शिशिर राईलाई नियुक्ति गरिएको छ। आर्थिक सल्लाहकारमा अमित कडरिया, स्वकीय सचिवकै रूपमा मनोज घिमिरे पनि छन्।
उपकुलपति गिरीले व्यक्तिगत रूपमा चालक पनि आफ्नै नियुक्ति गरेका छन्। गिरीले प्रतिष्ठानमा कार्यरत् चालक भने लिएका छैनन्।
यसरी प्रतिष्ठानभन्दा बाहिर मन्त्री र नातेदारको नियुक्तिमा विवादै-विवाद छ। प्रतिष्ठानको खरिदारीमा अनियमितताको गुनासो छ। गुनासो सम्बोधन गर्नुको सट्टा गिरी भने प्रतिष्ठानमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिव थपिरहेका छन्।
गिरीले पछिल्ला तीन नियुक्तिबारे सेतोपाटीले सोध्दा कुरा गर्न चाहेनन्। उनले भने, ‘म मिटिङमा छु, तपाईंसँग कुराकानी गर्न सक्दिनँ।’
उनका स्वकीय सचिव गिरीले प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता पोखरेलसँग बुझ्न अनुरोध गरे भने पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए।
गिरी विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत् रहेका बखत उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। उनी स्वास्थ्य मन्त्री ढकालनिकट हुन्। ढकाललाई मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव उठ्दा गिरीले सहयोग गरेका थिए।
व्यक्तिगत रूपमा नजिक, चुनावमा सहयोग गरेको र पार्टीनिकट पनि भएकाले ढकालले गिरीलाई प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए।
पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले शैक्षिक केन्द्रमा पार्टी कार्यकर्ता, आफन्तको नियुक्तिले पार्ने असर बयान गरेर नसकिने रहेको बताए। यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रलाई नै गाँजिरहेको भन्दै माथलेमाले भने, ‘सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने केन्द्रमा कार्यकर्ता, नातागोता र राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पारेको छ। विश्वविद्यालयले जुन गति लिनुपर्ने लिएको छैन। त्यहाँबाट पैदा हुने विद्यार्थीले जुन शिक्षा-दीक्षा, तालिम र चरित्र प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो छैन।’
शैक्षिक केन्द्रहरू नेपालको धरोहर भएको भन्दै माथेमाले ती धरोहर नै भत्काउने किसिमले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि राष्ट्रको भविष्य के हुन्छ? भन्दै नेताहरूको घैंटोमा घाम नलागेको देख्दा आश्चर्य लागेको बताए।
‘हामीले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राखियोस् भनेर चर्को स्वरमा धेरै करायौं, तर राजनीतिले हाम्रो कुरा सुनेको छैन,’ माथेमाले भने।